मेटाईएको फेसबुक सन्देशहरू कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
पछिल्लो वर्ष उनले धेरै घोटालाहरू सामना गरे पनि, फेसबुक अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क हो। यो एक वेबसाइट हो जुन हामीलाई धेरै संभावनाहरू प्रदान गर्दछ, कसरी आफ्नै पाना बनाउने। सब भन्दा सामान्य यो हो कि प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग सम्पर्कमा रहनको लागि उनीहरूको प्रोफाइल प्रयोग गर्छन्। यस कारणका लागि, सन्देशहरू सामान्यतया सामाजिक नेटवर्कमा लेखिन्छन्, च्याट मार्फत जुन यसमा एकीकृत गरिएको छ।
यद्यपि यो सम्भव छ कि केहि अवसरमा फेसबुकमा पठाइएका यी सन्देशहरू हराएका छन्। यी कुराकानीहरू गल्तीले मेटाईएको छ। यदि यो हुन्छ भने, त्यहाँ त्यस्ता सन्देशहरू रिकभर गर्ने तरिका छ जुन मेटाईएको छ। यद्यपि यो निर्भर गर्दछ कि हामीले यी सन्देशहरू अभिलेख राखेका छौं वा मेटाएका छन्। यो भिन्नता आवश्यक छ। यसैले हामी तपाईलाई तल यसको बारे मा बताउँछौं।
1 मेटाउने र संग्रह गर्ने बीच भिन्नता
2 अभिलेख वार्तालापहरूमा जाँच गर्नुहोस्
3 के हामीले मेटाएका च्याटहरू पुन: प्राप्ति गर्न सम्भव छ?
4 एन्ड्रोइडमा च्याटहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
मेटाउने र संग्रह गर्ने बीच भिन्नता
यो अवस्थामा यो आवश्यक पक्ष हो। यो सम्भव छ कि जब हामी कुराकानी मेटाईएको छ, हामीले वास्तवमै फाईलमा दियौं। त्यसकारण, जब हामी हाल फेसबुकमा च्याट मेटाउन जाँदैछौं, सामाजिक नेटवर्कले हामीलाई सोध्यो यदि हामी वास्तवमा के चाहन्छौं भने भनेको कुराकानी मेटाउनु हो कि हामी यसलाई संग्रह गर्न चाहन्छौं भने। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि यी दुई कार्यहरू बीचको भिन्नता एकदम स्पष्ट कुरा हो।
यदि हामीले सामाजिक नेटवर्कमा कुराकानी गरेको अभिलेखमा शर्त लगायौं भने, हामी के गर्दैछौं जुन यसलाई अभिलेख कुराकानी अनुभागमा राख्दैछ, जसमा हामी भर्खरै थियौं। तसर्थ, जब हामी चाहन्छौं हामीसँग फेरि कुराकानीमा पहुँच गर्न सक्दछौं। यो गर्नका लागि तपाईले अभिलेख कुराकानी सेक्सन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसोभए प्रश्नमा च्याट अझै पनी फेसबुक र मेसेन्जर अनुप्रयोगबाट कुनै समस्या बिना नै पहुँचयोग्य छ। जसले तपाईंलाई सामान्य रूपमा भने सन्देश पुनः प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
कुराकानी मेटाउनु फरक कार्य हो। हामी यस अवस्थामा के गर्दैछौं भनि स्थायी रूपमा मेटिएको कुराकानीलाई मेटाउनु हो। त्यो हो, यसमा पठाइएका सबै सन्देशहरू र फाईलहरू सदाका लागि मेटिने छन्। त्यसकारण, तपाईं अभिलेख कुराकानीमा उपस्थित हुनुहुने छैन। एक पटक मेटाईए पछि, त्यस कुराकानीको सामग्री फेरि देखाइने छैन। यो सधैं ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। खास गरी यदि एक पटक तपाईं फेसबुकमा कुराकानी मेटाउन चाहानुहुन्छ भने। हामीले सोच्नु पर्छ कुन विकल्प हाम्रो लागि उत्तम हो। किनभने परिणामहरू धेरै छन्।
अभिलेख वार्तालापहरूमा जाँच गर्नुहोस्
जब प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा सन्देश मेटाउँछ, यो सम्भव छ कि यो स्थायी रूपमा मेटाइएको थिएन। त्यसकारण, प्रयोगकर्तासँग अझै पनि कुराकानीमा पहुँच हुनुपर्दछ। जबसम्म अघिल्लो भागमा उल्लेख गरीएको कुरा पूरा हुन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले मेसेन्जरमा जाँच गर्नुपर्नेछ, अभिलेख कुराकानी भनिने एक अनुभाग भित्र। यसमा, सम्भव छ ती सबै कुराकानीहरूको पहुँच गर्न सम्भव छ जुन मेटाईएको छ। त्यसोभए यो परिस्थितिको पहिलो कदम हुनु पर्दछ।
तसर्थ, पहिले कम्प्युटरमा फेसबुक खोल्नु पर्छ। एक पटक भित्र जानेबित्तिकै तपाईंले स्क्रिनको बायाँपट्टी स्तम्भ हेर्नु पर्छ। तिनीहरू विकल्पहरूको एक श्रृंखला बाहिर आउँछन् र ती मध्ये दोस्रो मेसेन्जर हो। यसमा क्लिक गरेर, कुराकानीहरू सामाजिक नेटवर्क वा मेसेन्जर अनुप्रयोगमा ती सम्पर्कहरूसँग भएका पर्दामा खुल्नेछ। त्यसो भए, कुराकानीहरूको सूचीको माथि देब्रेपट्टि, त्यहाँ गियर व्हीलको आइकन छ। तपाईंले यो प्रतिमामा क्लिक गर्नुपर्नेछ।
जब यो सकियो, सानो प्रसंग मेनू यसमा विभिन्न विकल्पहरूको साथ देखा पर्दछ। यसमा देखाइएको एउटा अंश संग्रह गरिएको कुराकानीको हो। हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, र तिनीहरूले गर्नेछन् त्यसो भए स्क्रिनमा ती कुराकानीहरू देखाउनुहोस् जुन हामीले मेटाएका छौं फेसबुकमा। यस अवस्थामा त्यहाँ कुराकानी हुनुपर्दछ जुन हामी यस समयमा पुनः प्राप्त गर्न चाहन्छौं।
त्यसैले तपाईं त्यहाँ सन्देशहरू सबै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ कुराकानी फेरी काम गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई त्यो व्यक्तिलाई सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो प्राय जसो बाहिर पनि आउँछ प्रश्नमा कुराकानी पुन: प्राप्त गर्न आइकन। त्यसैले यो कुराकानी मेसेन्जरमा सामान्यको रूप मा फिर्ता जान्छ, बाँकी कुराकानीको जस्तो। जे होस् जब तपाईं चाहानुहुन्छ, तपाईं यसलाई यो सेक्सनमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि जब सम्म हामी केहि गर्दैनौं, यो मेटिने छैन।
के हामीले मेटाएका च्याटहरू पुन: प्राप्ति गर्न सम्भव छ?
यदि गरिएको छ भने अभिलेख गर्नुको सट्टा, भनिएको कुराकानी मेटाउनको लागि विकल्प प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, त्यहाँ नराम्रो खबर छ। फेसबुक आफैंले यो पुष्टि गर्दछ कुनै पनि तरिकाले कुराकानी पुनःप्राप्ति गर्न कुनै तरिका छैन। यसको मतलव यो हो कि यसमा पठाइएका सबै सन्देशहरू यसमा फाईलहरू (जस्तै फोटो, भिडियो वा GIF) को रूपमा सँधैका लागि मेटाइएको छ। कुनै पनि हिसाबले यो पहुँच गर्न सम्भव छैन।
सामाजिक नेटवर्कले यो पुष्टि गर्दछ केवल ती कुराकानीहरू जुन हामी अभिलेख राखेका छौं उपलब्ध हुनेछ, तिनीहरूका सम्बन्धित खण्डमा। थप रूपमा, यदि कुनै निश्चित क्षणमा हामी च्याट मेटाउन चाहन्छौं जुन अभिलेख सेक्सनमा छ, यो सम्भव छ। तर तपाईंले सम्झनु पर्छ कि यसको मतलब च्याट सदाको लागि हराउनेछ। त्यसकारण, तिनीहरूलाई अभिलेखहरूमा छोड्नु यस सम्बन्धमा उत्तम सम्भावित विकल्प हुन सक्छ।
एन्ड्रोइडमा च्याटहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग एन्ड्रोइड स्मार्टफोन छ भने त्यहाँ लामो शट छ, तर यसले काम गर्न सक्दछ। यसरी, तपाईंले फाईल अन्वेषक प्रयोग गर्नुपर्दछ, उदाहरण को लागी ES एक्सप्लोरर। ब्राउजरलाई धन्यबाद, तपाईसँग क्यासमा पहुँच छ जुन फोनमा स .्कलन गरिएको छ। पहिले तपाईले एन्ड्रोइड फोल्डर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि डाटा र त्यहाँ, त्यहाँ त्यहाँ एउटा कल fb_temp, जहाँ सामाजिक नेटवर्क अनुप्रयोगबाट डाटा भण्डारण हुन्छ।
उहीमा हामी अझै यी कुराकानीहरू गर्न सक्दछौं जुन फेसबुकमा मेटाइएको छ। यद्यपि यो कुराकानीको उमेरमा आंशिक रूपमा निर्भर गर्दछ। यदि समय बितिसकेको छ भने, यो अधिक सम्भावना छ कि हामीसँग अब यो पहुँच छैन, किनकि डाटा लेखिएको थियो। तर यो विधि प्रयास गर्न लायक हुन सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » मेटाईएको फेसबुक सन्देशहरू कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
अमेजनमा Koogeek र dodocool मा सर्वश्रेष्ठ छुट